DHEGEYSO-Musharax Faroole oo shir jaraa’id Garoowe ku qabtay kana hadlay doorashada 2016 – Radio Daljir
DHEGEYSO-Musharax Faroole oo shir jaraa’id Garoowe ku qabtay kana hadlay doorashada 2016
Seteembar 10, 2016 1:32 g 0
Garoowe, Sep 10 2016-Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole oo caawo shir jaraa’id ku qabtay Garowe ayaa sheegay laga bilaabo caawo inaan dalka Soomaaliya lahayn wax mdaxweyne ah. Dr. Cabdiraxmaan Faroole ayaa sheegay madaxweyne Xasan Sheikh in looga baahan yahay inuu maalinta berito ah baneeyo xafiiska madaxweynaha maadaama ay u dhamaatay afartii sano ee uu dalku maamulayay.
” Afartii sano ee Xasan Sheikh Maxamuud waxay ahayd afar sano oo NGO ah, afarsano oo ah bililiqo ah iyo afarsano khasaaro ah, sidaas darteed waa inuu xafiiska ku wareejiyaa gudoomiye Jawaari inta lagasoo dhisayo dowlad cusub, ” ayuu yiri Faroole oo intaas ku daray inaysan udulqaadan waxa uu Xasan Sheikh dalka ka sameynayo.
“Waxaan halkaan idinkaga cadeynayaa inaysan jirin wax tilaabo oo ka hirgalay arrimihii doorashooyinka dadban, waxaana idiin muuqata in meesha waxa ka socda ay yihiin mudo kororsi dadban,” ayuu yiri Faroole.
Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland ayaa sidoo kale si kulul u cambaareeyay faro gelinta beesha caalamku ku hayso arrimaha Soomaaliya, isagoo sheegay inay Soomaaliya ujooogaan danahooda gaarka ah iyo inaan dalku hagaagin.
Sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhibaatada ka taagan magaalada Muqdisho gaar ahaan cuno qabataynta shacabka lagusoo rogay ee laga xiray wadooyinka inay gaadiid kun maraan.
DHEGEYSO-Muran ka dhextaagan maamulka iyo golaha deegaanka Godob-jiraan.